iPhone 12 Pro Max vs OnePlus 9 Pro: Performance, bhatiri, maficha uye zvimwe | IPhone nhau
Ignacio Sala | 25/03/2021 22:00 | Kupikisana, iPhone 12
Samsung neApple vanga vachitonga telephony yekumusoro-soro sezvo mafoni akatanga kutonga pamusika. Kwemakore, makambani akati wandei akaedza nyepera kupinda munzvimbo iyi pasina kubudirira. Iyo yazvino kambani iri kuyedza kuwana tsoka ndeye OnePlus, neiyo OnePlus 9 Pro.
Iyo yekuKorea yakasimba LG yakaedza kwemakore akati wandei uye pakupedzisira yave padanho rekuvhara chikamu chefoni (haigone kuwana mutengi) mushure mekurasikirwa anodarika mabhiriyoni mana emadhora emadhora mune ino chikamu. Ko OnePlus ichatevera nzira imwe chete here? Munyaya ino ticha Enzanisa iPhone 12 Pro Max kune OnePlus 9 Pro kuti uone kana uine sarudzo.
2 Ratidza uye zororo mwero
3 Bhatiri kugona uye hupenyu
4 Seti yemakamera
5 Simba, RAM uye kuchengetedza
Screen 6.7 inches - 2.778 × 1.284 - 60 Hz zorodza 6.7 inches - 3.215 × 1.440 - 120 Hz zorodza
Processor A14 Bionic Snapdragon 888
RAM ndangariro 6 GB 8-12 GB LPDDR5
Self Storage 128-256-512 GB 128-256 GB UFS 3.1
Operating system iOS 14 Android 11 ine OxygenOS dhizaini yekugadzirisa
Makamera ekumashure 12 MP Wide Angle - 12 MP Ultra Wide Angle - 12 MP Telephoto Main sensor 48 MP (Sony) - Wide angle 50 MP (Sony) - Telephoto lens 8 MP - Monochrome sensor 2 MP neHasselblad tekinoroji.
Mberi kamera 12 MP 16 MP
Battery 3.687 naRaama 4.500 naRaama
Kubatana 5G - WiFi 6 - Bluetooth 5.0 - NFC - Mheni 5G - WiFi 6 - Bluetooth 5.2 - NFC - USB-C 3.1
Kuvhura FaceID On-screen chigunwe chemunwe
iPhone 12 uye Samsung Galaxy S21, ndeapi mutsauko?
Ratidza uye zororo mwero
Kunyangwe runyerekupe pamberi pekutanga kweiyo iPhone 12 renji yakaratidza kuti, pakupedzisira, Apple inogona kushandisa 120 Hz skrini mune iyi nharaunda nyowani, zvinosuruvarisa kuti yakanga isina kudaro.
Kune akawanda zviteshi pamusika ne zororo mwero wakakwira kupfuura iyo iPhone renji, ingave 90 kana 120 Hz. Iyo nyowani OnePlus 9Pro, senge yakazara Galaxy S21 renji, inosanganisa skrini inosvika ku120 Hz (inogona kugadzirirwa kuti ishande pa60 Hz).
Inofanira kuyeukwa kuti Apple ndiyo yaive kambani yekutanga kuvhura piritsi ine mwero wekuvandudza muna 2017, iyo yaive chizvarwa chechipiri cheiyo 12,9-inch iPad Pro.
Chiyero chepamusoro chekuzorodza inotibvumidza kunakidzwa nezviri pamwe nekuwedzera kuyerera, kwete chete kana tichiverenga, kupuruzira kuburikidza nemapeji ewebhu kana mabhuku, asi zvakare kana uchitamba mitambo.
Icho chikonzero nei ichi chisati chasvika iyo iPhone hachizivikanwe, asi icho chingangove chine hukama neiyo yakanyanya bhatiri kunwa kwairi kwakabatana.
Vese vari vaviri shandisa zvakafanana 6,7-inch screen saiziNekudaro, senguva dzose muiyo iPhone renji, kumusoro kwechiso ndiko notch ine iyo FaceID, inotora nzvimbo yakakura kwazvo kupfuura kamera yekumberi yeOnePlus 9 Pro.
Bhatiri kugona uye hupenyu
Kugonesa kweIOS kwagara kubvumidza Apple racann pane bhatiri kugona. Dai zvisiri izvo zvekuti Apple inogadzira iyo yekushandisa sisitimu chaiyo, iyo iPhone mabhatiri aizove neakakwira hunyanzvi, sezvazviri mune iyo Android ecosystem.
Ndichiri iPhone 12 Pro Max, bhatiri rinosvika panokwana 3.687 naRaama, mune itsva OnePlus 9 Pro izvi zvinosvika iyo 4.500 mAh.
Paunenge uchichaja chishandiso, Apple inogumira inokurumidza bhatiri kuchaja kune 15W. Nekudaro, ivo vakomana paOnePlus vanopa rutsigiro rwewired nekuchaja kuchaja kusvika ku65W uye zvisina waya kusvika ku50W (izvi zvinongowanikwa nechaja chaiyo inotengeswa yakazvimiririra).
Muvhidhiyo iri pamusoro, tinogona kuona kuti iyo OnePlus 9 Pro inodarika zvese zvishandiso Iyo inofananidzwa nayo: Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21 +, iPhone 12 Pro Max uye iPhone 12 zvese mumaawa ekufambisa uye mukuberekesa kweYouTube vhidhiyo uye mumitambo ye3D.
Iyo inononoka bhatiri kuchaja, kupisa kushoma kunogadzirwa panguva yekuita, saka nekufamba kwenguva, inozogara kwenguva yakareba kupfuura kana tikachaja smartphone yedu mumaminitsi makumi matatu kana mashoma zuva rega rega, kubhadharisa nekukurumidza kunogona kuuya kunobatsira panguva dzakatarwa mukati mehupenyu hwechigadzirwa.
Nekuvhurwa kweiyo iPhone 11, Apple yakaunza matatu makamera kune iyo iPhone renji kekutanga: Wide angle, Ultra wide angle uye telephoto, kuva ese gumi nemaviri malenzi. Iine iPhone 12 Pro Max, Apple yakachengeta huwandu hwacho ichienda nekuvandudza software yekugadzirisa uye nekuwedzera iyo LiDAR sensor.
Mukufamba kuti uyedze kunatsiridza mhando yemifananidzo yako (rangarira kuti muchikamu chekamera mugadziri uyu haana kumboziva maitiro ekuita basa rechikoro zvakanaka), akasarudza muOnePlus 9 Pro yemakamera matatu: 48 MP main sensor, 50 MP wide angle, (ese akagadzirwa naSony), telephoto lens ye8 MP uye 2 MP monochrome sensor.
Kugadzirira kushomeka uku, OnePlus yakabatana naHasselblad mukugadzira software uye kuyera kwema sensors, zvisinei, bvunzo dzekutanga dzinoratidza kuti Iko hakuna chero mutsauko uchienzaniswa neakadarika mamodheru.
Simba, RAM uye kuchengetedza
Kana isu tichitaura nezve maprosesa, isu tinofanirwa kutaura nezve A14 Bionic kubva ku iPhone 12 Pro Max (iyo inowanikwawo mune yese iPhone 12 renji) uye iyo Qualcomm Snapdragon 888, processor yatinogona kuwana muOnePlus 9 Pro.
Mune bhenji chikumbiro chinoshandiswa kuyera mashandiro emaprosesa, Geekbench, iyo iPhone 12 Pro Max ine yayo 6 GB ye RAM, inowana mamakisi e 1.614 poindi mune imwechete processor bvunzo. ari OnePlus 9 Pro, inogara pa1.105 chete mumayedzo akafanana pane iyo 12 GB RAM modhi.
Mukuyedzwa neese cores anoshanda, Geekbench inopa iyo iPhone 12 Pro Max a mamaki e4.148 mapoinzi eiyo 3.603 mapoinzi akagamuchirwa neOnePlus 9 Pro (12GB RAM modhi) ine processor ine simba kwazvo iripamusika kubva kuQualcomm.
Nezve sarudzo dzekuchengetedza, nepo apuro inotipa 3 sarudzo: 128GB, 256GB, uye 512GB, the OnePlus 9 Pro inogumira ku 128 GB uye 256 GB.
Kana isu tikataura nezve RAM, Apple ine imwecheteyo gadziriso ye6 GB ye RAM yeiyo iPhone 12 Pro Max, nepo maAsia achiti OnePlus inopa maviri mamodheru ane 8 uye 12 GB ye RAM mhando LPDDR5.
Sezvo Apple yakatanga iyo FaceID kuzivikanwa system, makambani mazhinji akaedza kuteedzera iyo system, asi hapana akabudirira nechero kubudirira.
Iyo yazvino OnePlus modhi ndiyo yekupedzisira bvunzo, sezvo ichitipa iyo a chigunwe cheminwe pasi pechidzitiro uye 2D kumeso kusvinura system (FaceID ndeye 3D), saka tinogona kuivhura nechero mufananidzo.
Vazhinji vashandisi vanosimbisa kuti zvese zviri zviviri Samsung neApple ipa zviteshi zvakafanana kumakwikwi emutengo wakakwirira zvakanyanya, chinhu chinogona kurambwa.
Nekudaro, hapana mumwe mugadziri anopa seyakawanda makore ekuvandudza (Samsung inopa 3 makore eApple anovandudza uye makore mana ekuchengetedzwa kwekuchengetedza) nepo Apple kusvika pamakore mashanu ekuvandudzwa.
Uyewo, hapana mumwe mugadziri anopa ecosystem yakabatana nemimwe michina, angave mahwendefa, mawatchwatches kana makomputa senge iyo inopihwa nemakambani ese
Kana iwe uchikoshesa kusangana uko kunopihwa neApple uye Samsung uye zviri nyore izvo zvinosanganisira zuva nezuva, mutengo wakakwirira unozvipembedza. Ehezve, mune iyo 12 GB iPhone 512 Pro Max, mutengo hauchadzoreke, kunyangwe chiri chinhu icho Apple chatakamboshandisa muchikamu chino.
128 GB 1.221 euros kuAmazon 909 euros
256 GB 1.299 euros kuAmazon 999 euros
512 GB 1.573 euros kuAmazon haapo
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 12 » iPhone 12 Pro Max vs OnePlus 9 Pro: Performance, Bhatiri, Zvimiro uye Zvimwe
Ini ndakangoverenga kuti mune zvese zvinhu iyo yekuwedzera iri pamusoro! Zvinhu sezvazviri! Yakawanda bhatiri, zvirinani zororo zororo, gondohwe rakawanda, nezvimwe.
Iwo maAirPod matsva aizotangwa muchikamu chechitatu uye kugadzirwa kwavo kuri kutanga